15 Soo Dhaweynta Meelaha Ugu Mushaharka Badan Dunida | 2022 Dib u eegid
Bogga ugu weyn 15 Soo Dhaweynta Meelaha Ugu Mushaharka Badan Dunida | 2022 Dib u eegid
Shaqada soo dhawaynta hadda way horumartay, waxayna ka soo baxeen kuwa hoose ilaa kuwa ugu mushaharka badan warshadaha soo dhawaynta.
Soo -dhaweeyaha waa shaqaale ka shaqeeya xafiis ama bixiya taageero maamul. Shaqada waxaa caadi ahaan lagu sameeyaa aag sugitaan, sida lobby ama miiska xafiiska hore ee shirkad ama urur.
Soo dhaweeyuhu waa qof u shaqeeya shirkad oo salaamaya booqdayaasha, bukaanka, ama macaamiisha kana jawaabaya wicitaanada telefoonka.
Qaar ka mid ah waajibaadyada soo dhaweynta waxaa ka mid ah ka jawaabista su'aalaha booqdayaasha ee ku saabsan shirkadda iyo alaabteeda ama adeegyadeeda, u hagida booqdayaasha meelaha ay u socdaan, kala soocida iyo qaybinta waraaqaha, iyo ka jawaabista wicitaanada soo socda ee taleefannada khadadka badan.
Soo -dhaweeyaha ayaa inta badan ah meesha ugu horreysa ee lagala soo xiriiro meherad kasta.
Ururadu waxay caadiyan ka filayaan soo dhawaynta inuu ilaaliyo degenaan, asluub ​​iyo akhlaaq xirfadeed markasta, iyadoon loo eegayn habdhaqanka booqdaha. Natiijo ahaan, soo dhawaynayaashu waxay guriga ku qaataan mushahar cajiib ah dhamaadka bisha.
Qoraalkan, waxaan ku eegi doonaa qaar ka mid ah shaqooyinka soo-dhoweynta ugu mushaharka badan adduunka.
Soo -dhoweeyeyaasha lacag fiican ma helaan?
Waddanka Maraykanka, celceliska mushaharka soo -dhaweeyaha ayaa qiyaastii ah $ 26,058 sannadkii. Soo dhoweeyayaashu waxay helaan mushahar fiican. Mushaharku wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran nooca shaqada soo -dhoweeyaha.
Intee in le'eg ayay soo dhaweeyayaashu sameeyaan?
Dalka Maraykanka, celceliska mushaharka saacadii ee soo dhawaynta waa $14.18. Halka ZipRecruiter ay ka warbixiso mushaharka saacadii ah sida $21.15 iyo sida ugu hooseeya $7.93, inta badan mushaharka soo dhawaynta ee Maraykanka ayaa hadda u dhexeeya $11.54 (25 boqolkiiba) ilaa $15.38 (boqolkiiba 75).
Gobolkee ayaa leh mushaharka ugu badan ee soo dhoweeyaha USA?
DARAJO Gobolka SALARY
1 District of Columbia $ 40,050
2 New York $ 36,520
3 Connecticut $ 35,460
4 Washington $ 35,870
5 California $ 35,360
In kasta oo ay kala duwan tahay iyadoo ku xidhan tahay sannadaha waayo-aragnimada, celceliska mushaharka saacaddii ee soo-dhoweeyaha degmada Columbia waa $20.79.
Degmada Columbia waa gobolka ugu mushaharka badan soo-dhaweeyaha.
Waxay kasbadaan mushahar saacad ah $ 20.79 iyo mushahar sanadle ah $ 40,050. Tani waxay ka dhigaysaa magaalada ugu mushaharka badan Maraykanka soo-dhoweeyeyaasha.
New York ayaa gashay kaalinta labaad. Waxay leedahay 9.74 boqolkiiba heerka shaqada, mushahar saacaddii ah $ 17.92, iyo mushahar sanadle ah $ 36,520.
Qiimaha nolosha New York waa 127.7.
In kasta oo ay kala duwan tahay iyadoo ku xiran tahay sannadaha waayo-aragnimada, celceliska mushaharka saacaddii ee soo-dhoweeyaha Washington waa $18.02.
Washington waa gobolka saddexaad ee ugu mushaarka badan soo -dhoweeyeyaasha.
Celceliska mushaharka saacaddii ee ah $ 18.02 iyo mushaarka sanadlaha ah $ 35,870. Tani waxay ka dhigaysaa magaalada saddexaad ee ugu mushaharka badan Maraykanka soo-dhoweeyeyaasha.
Connecticut ayaa ku jirta kaalinta afraad. Waxay leedahay heerka shaqada ee 7.46 kunkiiba oo leh saacadii mushaharka $ 17.61 iyo mushahar sanadle ah $ 35,460.
Connecticut waxay leedahay tusmada qiimaha-nololeed ee 127.7
California waa shanaad. Waa magaalada shanaad ee ugu mushaharka badan Maraykanka soo-dhoweeyeyaasha. Kaliforniya waxay leedahay saamiga shaqo-u-lahaanshaha dadka ee 5.23.
Soo dhoweeyeyaasha California waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 35360 sanadkii ama $ 17.61 saacaddii.
Sida Loo Noqdo Soo Dhaweeye?
In kasta oo shuruudaha shaqaalayntu ay ku kala duwan yihiin warshadaha iyo loo -shaqeeyaha, soo -dhoweeyeyaashu waxay caadi ahaan u baahan yihiin inay haystaan ​​diblooma dugsiga sare iyo xirfadaha isgaarsiinta oo aad u fiican.
Soo -dhaweeyayaashu waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​dibloomada dugsiga sare ama wax u dhigma, oo loo -shaqeeyayaashu waxay doorbidi karaan inay shaqaaleeyaan musharraxiin khibrad hore u leh codsiyada software -ka kombiyuutarka ee gaarka ah.
Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn wax shahaado rasmi ah si aad ugu shaqayso soo dhawayne, loo-shaqeeyayaasha qaarkood waxay door bidaan inaad leedahay GCSE-yada, gaar ahaan Ingiriisiga iyo xisaabta.
Xirfadaha IT sida habaynta erayga, iyo sidoo kale kartida isticmaalka internetka iyo iimaylka, ayaa sidoo kale laga yaabaa inay faa'iido leedahay.
Xirfadaha adeegga macaamiisha ee wanaagsan iyo hab-dhaqanka telifoonka ee wacan ayaa sidoo kale caawin kara. Shaqada ku meel gaadhka ah waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu helo khibrad waxayna badanaa u horseedi kartaa boos joogto ah.
Maxay yihiin 15 shaqooyinka soo dhaweynta ee ugu mushaarka badan USA?
Shaqooyinka soo dhaweynta ee ugu mushaarka badan USA waxaa ka mid ah;
1. Kaaliyaha Fulinta
Kaaliyaha Fulinta waa qof caawiya madaxda shirkadda, dadka caanka ah, iyo saraakiisha siyaasadda ama dawladda.
Kaaliyeyaasha fulinta waxay ka caawiyaan hawlo maamul oo kala duwan, sida jadwalka ballamaha iyo maaraynta jadwalka. Kaaliyaha fulinta waxa uu u shaqeeyaa sidii irid-ilaaliye, isaga oo go'aaminaya wicida taleefoonka, iimaylada, ama shirarka shaqsi ahaanta ah ee ay la kulmaan madaxdooda.
Waxay sidoo kale ku sameeyaan ganacsi iyaga oo matalaya maamulayaashooda asxaab kale ama iibiyeyaal dibadeed.
Waajibaadka iyo mas'uuliyadaha soo socda waxaa leh Kaaliyaha Fulinta:
Maareynta dhammaan isgaarsiinta soo galaya iyo kuwa baxaya, sida iimaylada, wicitaannada taleefanka, warbixinnada, iyo waraaqaha gudaha
Dukumentiyada muhiimka ah, sida warbixinnada, qoraalada kulanka, emaylka, iyo waraaqaha, waa in la xareeyaa.
Ilaalinta jadwalka fulinta, oo ay ku jiraan ku darida dhacdooyinka, dib u dhigista ballamaha, iyo bixinta warbixinno maalinle ah
U adeegidda sidii irid -haye u ah xiriirada gudaha iyo dibadda sida iibiyeyaasha, saaxiibbada, macaamiisha, iyo macaamiisha.
Samaynta baadhitaanno iyo qorista warbixinno ku saabsan mawduucyo kala duwan oo ka jawaabaya baahiyaha fulinta.
Dhacdooyinka dibadda, sida lacag ururinta, tartamada isboortiga, iyo dhacdooyinka qaddarinta, waa in la qorsheeyo oo la habeeyo.
Haysashada macluumaadka muhiimka ah iyo dukumiintiyada jidh ahaan iyo elektaroonig ahaan loo habeeyay.
Ilaalinta heer sare oo ah ikhtiyaar iyo qarsoodi
Kaaliyayaasha Fulinta ayaa qaata celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 53,970.
2. Soo-dhaweynta Soo-dhaweynta
Soo dhawaynta miiska hore salaamo booqdayaasha ururka waxa ku salaamaya soo dhawaynta miiska hore. Shakhsigu waxa kale oo la heli karaa wicitaano telefoon
Soo -dhaweeyaha, isagoo xubin ka ah shaqaalaha miiska hore, wuxuu qaban karaa waajibaadyada maamulka.
Isaga ama iyada ayaa hubin kara dhibcaha, waxay qaban karaan lacag -hayaha, way diri karaan farriimaha, aqbalayaan waxayna gaarsiin doonaan gaarsiinta iyo/ama boostada maalinlaha ah, waxay siin karaan macluumaad guud oo ku saabsan ururka dadweynaha ama macaamiisha, iyo wixii la mid ah.
Shaqooyinka miiska hore waxay sida caadiga ah ka mid yihiin mas'uuliyadaha soo socda:
Salaan macaamiisha iyo macaamiisha
Ka jawaab telefoonnada, wareejinta wicitaannada, oo qaado farriimaha.
Waxay soo dhoweeyaan booqdayaasha waxayna u jiheeyaan meelaha loogu talagalay ururka dhexdiisa.
Waxay galaan macluumaadka macmiilka waxayna diraan waraaqo.
Soo dhawaynayaashan miiska hore waxay caadi ahaan kasbadaan $20 saacadii. Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka soo dhaweynta ee ugu mushaarka badan.
3. Wakiilka adeega Macaamiisha
Shaqada kale ee soo dhaweynta ee caanka ah ee si fiican u bixisa waa Wakiilka Adeegga Macmiilka.
Waxay ku lug leedahay la macaamilka macaamiisha iyo siinta macaamiisha ama booqdayaasha macluumaad ku saabsan alaabta ama adeegyada urur.
Waajibaadka gaarka ah ee wakiilka adeegga macmiilka way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran waxa loo -shaqeeyaha ama warshaduhu u baahan yihiin.
Waajibaadka wakiillada adeegga macaamiisha waa:
Waxay siiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada ururka macaamiisha, soo wacayaasha, iyo booqdayaasha.
Dhegayso welwelka iyo su'aalaha macmiilka oo kaga jawaab jawaabo ama jawaabo.
Waxay la socdaan xiriirada macaamilka iyo falalka.
Qaado amarada Macaamiisha iyo biilasha habka lacag bixinta.
Waxay u gudbiyaan macaamiisha ama booqdayaasha qofka ama waaxda si ku filan wax uga qaban kara walaacooda.
Wakiilada adeegga macmiilka waxay kasbadaan $ 12 ilaa $ 18 saacaddii
4. Karaaniinta Xafiiska Guud
Ururada qaarkood waxay xafiisyada hore ka shaqaaleeyaan karraaniyaasha Xafiiska Guud. Waxaa laga heli karaa xafiisyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda.
Waxay qabtaan hawlo wadaado oo kala duwan. Hawlahaas waxaa ka mid ah ka jawaabista taleefannada, qorista iyo xaraynta dukumentiyada, iyo wixii la mid ah.
Karaaniinta xafiiska guud ayaa sida caadiga ah qabta shaqooyinka soo socda:
Waxay sameeyaan ballamo waxayna soo dhaweeyaan macaamiisha iyo booqdayaasha.
Ka jawaab wareejinta wicitaannada Macaamiisha iyo farriimaha
Macaamiisha, macmiilka, iyo dadweynaha guudba waxay ku tiirsanaan karaan macluumaad guud.
Waxay abuuraan, socodsiiyaan, oo u gudbiyaan xusuus -qorka, warbixinnada, iyo dukumiintiyada maamulka.
Dukumiintiyada elektiroonigga ah iyo kuwa waraaqaha ahba waa la diyaariyey, la koobiyeeyay, la cusboonaysiiyay, oo ay soo gudbiyeen.
Waxay galaan xogta xogta ay ururiyeen.
Qof walba wuxuu si sahlan u gudan karaa waajibaadka karraaniga guud ee xafiiska. Tani waa sababta oo ah xirfadaha loo baahan yahay waa aasaaska waxaana lagu bartaa shaqada. Dibloomada dugsiga sare ama wax u dhigma ayaa looga baahan yahay waxbarashada ugu yar.
Karaaniinta Xafiiska Guud waxaa la siiyaa inta u dhexeysa $ 13 iyo $ 18 saacaddii. Ururka ayaa go'aamiya mushaarka.
5. Xoghaynta Macluumaadka
Karraaniyada macluumaadka waxay qabtaan hawlo kala duwan xafiiska hore ee ururka, lobby, goobta sugitaanka, ama soo dhawaynta. Asal ahaan waxay ururiyaan xogta waxayna hayaan diiwaannada ururka.
Karaaniinta warfaafintu waxay sida caadiga ah qabtaan shaqooyinka soo socda:
Waxay ururiyaan oo diiwaan galiyaan macluumaadka macaamiisha, macaamiisha, iyo xubnaha dadweynaha.
Fayl garee oo ku xafid waraaqaha sidoo kale si elektaroonig ah.
Waxay ka jawaabaan ama ka jawaabaan su'aalaha macaamiisha ee ku saabsan adeegga ama alaabta ururka.
Waxay ka fuliyaan waajibaadka taakuleynta xafiiska ee caadiga ah xafiisyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda.
Dibloomada dugsiga sare waa shuruudda waxbarasho ee ugu yar.
Karraaniga cusub ee la shaqaaleysiiyay ayaa heli doona tababar ku saabsan shaqada oo baraya sida loo isticmaalo codsiyada kombiyuutarka iyo hababka wadaadnimada.
Karaaniinta warku waxay sida caadiga ah sameeyaan inta u dhaxaysa $ 13 iyo $ 20 saacaddii.
6. Soo -dhaweeyaha Rugta Caafimaadka
Shaqooyinka soo-dhowaynta ee kale ee ugu mushaharka badan waa soo-dhowaynta bukaan-socodka. Soo dhawaynta bukaan-socodku waa shaqaale miiska hore ka shaqeeya oo ka shaqeeya cisbitaal.
Isaga ama iyada waa inay salaamaan oo diwaangeliyaan bukaanka markay gelayaan rugta caafimaadka, cusbitaalka, ama qaybta qaabilaadda xarunta caafimaadka.
Waajibaadka caadiga ah way ka duwan yihiin kuwa qaabilaadda kiliinikada ee ka shaqeeya shaqooyinka kalkaalinta guriga waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Waxay soo dhaweeyaan bukaanka iyo booqdayaasha rugta caafimaadka ama isbitaalka.
Toos ah bukaanada, booqdayaasha, iyo wicitaanada taleefanka dadka ama waaxaha.
Waxay siiyaan macluumaadka guud dadweynaha iyo jawaabaha su'aalaha aasaasiga ah ee ku saabsan adeegyada iyo hababka isbitaalka.
Taleefanka ka jawaab oo farriimaha ka qaado bukaannada, macaamiisha, iyo macaamiisha.
Waxay ka caawiyaan dhakhaatiirta iyo maamulka hawlaha wadaadnimada iyo kiliinikada.
Mushaharka sanadlaha ee qaabilaha rugta caafimaadku waa $ 34,888.
Akhri: Top 10 Majaajilaystayaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka
7. Hoteelka, iyo soo -dhoweeyeyaasha motel -ka
Kuwani waa dadka ka shaqeeya miisaska hore ee hoteellada iyo motellada, salaamaya macaamiisha iyo martida.
Warshadaha soo dhaweynta iyo dalxiiska, waxay bixiyaan adeeg macmiil waxayna u sameeyaan boos celin martida.
Haddii aad jeceshahay inaad la sheekaysato dadka kale oo aad haysato shaqo u baahan inaad safarto, waad ku raaxaysan doontaa tan.
Mas'uuliyadaha caadiga ah ee karraaniyada miiska hore waxaa ka mid ah:
Waxay salaamaan oo ku soo dhaweeyaan martida miiska hore ee aasaaska.
Waa inay ku meeleeyaan qolal iyo sidoo kale hubinta iyo ka bixida martida.
Boos celinta qolka waa la qaadaa, waa la xaqiijiyaa, oo waa loo beddelaa martida.
Sii martida macluumaad ku saabsan siyaasadaha iyo adeegyada hoteelka.
Waxay ka jawaabaan taleefannada waxayna qaataan oo u gudbiyaan farriimaha booqdayaasha.
Qabashada cabashooyinka iyo codsiyada martida.
Waxay caadi ahaan kasbadaan mushahar sanadle ah oo dhexdhexaad ah $ 22,850.
Ururo badan, xoghayeyaashu waxay ka shaqeeyaan miiska hore.
Waxay qabtaan hawlo kala duwan sida salaanta macaamiisha iyo qaadashada fariimaha.
Masuuliyadaha caadiga ah ee xoghayayaasha waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Macaamiisha/wicitaannada taleefannada waa la jawaabay, farriimaha waa la qaadaa, wicitaannadana waa la wareejiyaa.
Waxaa loo magdhabaa maaraynta farriimaha soo galaya iyo kuwa baxaya, iimaylada, iyo fakisyada.
Ka jawaab su'aalaha macmiilka ama soo wacaha magaca ururka.
Waxay ballamo u sameeyaan macaamiisha ama macaamiisha.
Diyaari biilasha Macaamiisha iyo qaansheegadkooda.
Waxay fuliyaan waajibaadyada xisaabaadka waxayna keydiyaan keydka macluumaadka qaab elektaroonik ah ama warqad ah.
Xoghayayaashu waxay ka shaqeeyaan warshado kala duwan. Badankoodu waxay ka shaqeeyaan xarumaha sharciga iyo caafimaadka.
Booska Xoghayeyaashu waa u furan yahay qof kasta. Waxaad heli doontaa tababar shaqo oo socon doona dhowr toddobaad. Tani waa shaqooyinka kale ee soo dhaweeyaha ugu mushaarka badan.
Xoghayeyaasha waxaa la siiyaa inta u dhexeysa $ 18 iyo $ 20 saacaddii.
9. Karraaniyada miiska dalxiiska
Kuwani waa dadka ka shaqeeya miiska hore ee dalxiiska oo salaama macaamiisha iyo martida.
Ku salaam oo ku soo dhawee martida miiska hore ee aasaaska.
Hal shay ayaa hubaal ah: tani maahan shaqo dadka soo gala maxaa yeelay waxay u baahan tahay la kulanka iyo la hadalka dadka maalin walba.
Waxay caadi ahaan kasbadaan inta u dhaxaysa $ 12 iyo $ 20 saacaddii.
10. Kaaliyeyaasha Maamulka
Kaaliyaha maamulka ee shaqada miiska hore ee ururo badan.
Masuuliyadaha caadiga ah ee Kaaliyaha Maamulka waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Ballan u samee macaamiisha ama macaamiisha.
Urur si fudud ayaa kuu shaqaalayn doona haddii aad haysato dibloomada dugsiga sare iyo aqoonta dhexe ee ka shaqaynta erayga, xaashiyaha, iyo softiweerka xogta.
Noocan ah shaqada miiska hore ayaa caadi ahaan si fiican u bixisa. Waa mid ka mid ah shaqooyinka soo dhawaynta ee ugu mushaharka badan.
Kaaliyayaasha maamulka waxaa la siiyaa inta u dhaxaysa $ 18 iyo $ 20 saacaddii.
Bangiyadu waxay shaqaaleeyaan kuwa wax iibsada si ay u helaan oo u bixiyaan lacagaha.
Waxay ka baaraandegi karaan macaamilka joogtada ah ee bangiyada iyo xitaa hay'adaha amaahda. Lacag dhigashada lacag caddaan ah, jeegaga lacag -bixinta, iyo aruurinta lacagaha deynta ayaa tusaale u ah macaamil ganacsi.
Tibaaxayaashu waxay ka shaqeeyaan miiska hore waxayna raacaan hawlaha:
Waxay ka jawaabaan weydiimaha macaamiisha ee ku saabsan xisaabaadkooda.
Macaamiishu waxay ku bixin karaan lacag caddaan ah, jeegag, ama qaabab kale oo lacag bixin ah.
Markay waajibaadkooda ku jiraan, waxay si elektaroonig ah u diiwaangeliyaan macaamil ganacsi.
Waxay xaqiijiyaan aqoonsiga macmiilka waxayna hubiyaan in asaga ama ayada ay haystaan ​​lacag ku filan oo ay ku daboolaan macaamilka.
Si aad u shaqayso sida teller, waa inaad haysataa shahaadada dugsiga sare ama wax u dhigma.
Taliyayaasha cusub waxaa badanaa la siiyaa tababar shaqo.
Shaqaaluhu waxay wax ka bartaan hababka bangiyada iyo sida loo isticmaalo software kombiyuutar oo ay isticmaalaan bangiyada ama shirkadaha amaahda iyada oo loo marayo tababar.
Ganacsadayaashu waxay sameeyaan qiyaastii $ 13 saacaddii celcelis ahaan.
12 Maareeyaha Xafiiska
Masuuliyadaha maareeyaha xafiiska waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Hawlaha u qoondee oo hubso in dhammaan jagooyinka shaqaaluhu ay daboolan yihiin muddada wareegga. Ka jawaab cabashooyinka iyo walaaca booqdaha.
Ka jawaabista wicitaanada taleefanka, toosinta wicitaanada, iyo bixinta macluumaadka aasaasiga ah
Maamul oo kormeero shaqaalaha taageerada, soo dhoweeyeyaasha, iyo ilaalada amniga.
Xirfadaha adeegga macmiilka oo tayo leh ayaa looga baahan yahay inay wax ka qabtaan cabashooyinka iyo codsiyada.
Qor shaqaale iyo tababar shaqaale cusub
Joogtee qalabka xafiisyada sida koobiyeyaasha, mashiinnada fakiska, iyo wixii la mid ah.
La soco miiska hore oo hubi in dhammaan shaqaalaha ay raacaan dhammaan hababka amniga booqdaha.
Kormeer boostada, baakadaha, iyo waraaqaha.
Iibka, daba-galka iyo qaansheegta agabka Xafiiska.
Jadwalka waa in loo abuuro, loo habeeyo, loona hayaa dhammaan shaqaalaha.
Hubi in miiska hore uu yahay shaqaale.
Samee xisaabin, boos celin, iyo hawlaha wadaadnimada.
Marka loo baahdo, ka caawi qorsheynta dhacdooyinka shirkadda, shirarka, qadada, hawlaha koox-dhisidda shaqaalaha, iyo mashaariicda gaarka ah.
Dibloomada dugsiga sare ama wax u dhigma ayaa loo baahan yahay; Shahaadada koowaad ama shahaadada maamulka maadada la xiriirta ayaa la doorbidayaa.
Caadi ahaan waxay sameeyaan qiyaastii $ 21 saacaddii.
13. Kaaliyayaal Shakhsi ah
Kaaliyeyaasha shakhsi ahaaneed waxay qabtaan hawlo maamul oo kala duwan oo loogu talagalay maareeyayaasha iyo madaxda (ama, marmar, shakhsiyaadka iyo qoysaska caanka ah ee hodanka ah ama caanka ah).
Si ka duwan maamule, oo sida caadiga ah maamula koox, kaaliye shaqsi (PA) ayaa sida caadiga ah u qabta hawlaha maamulka isagoo matalaya hal qof.
Mas'uuliyadaha caadiga ah waxaa ka mid ah:
u shaqaynaya meesha ugu horraysa ee lagala soo xidhiidho: qabashada waraaqaha iyo wicitaannada telefoonka
maareynta jadwalka taariikhda iyo abaabulka shirarka iyo ballamaha, si joogto ah u xakameeya marin u helka maareeyaha/fulinta fulinta iyo diyaarinta safarka, gaadiidka, iyo hoyga
abaabulka shirarka iyo dhacdooyinka
xusuusinta maamulaha/fulinta hawlaha muhiimka ah iyo waqtiyada kama dambaysta ah.
Ma jiraan shahaadooyin tacliimeed oo rasmi ah sida caadiga ah, in kasta oo loo-shaqeeyayaasha qaarkood laga yaabo inay u baahdaan musharraxiinta A-level/sare, iyo tiro yar ayaa laga yaabaa inay doorbidaan shahaadooyinka.
Haddii shahaado loo baahan yahay, mid xagga isgaarsiinta, tignoolajiyada, ama ganacsiga ayaa laga yaabaa inay ku caawiso.
Waxay kasbadaan mushahar saacad ah $ 19.
14. Caawiyaha Virtual
Kaaliyeyaasha dalwaddu, oo sidoo kale loo yaqaanno xirfadlayaal dalwaddii ah, waa kaaliyayaal maamul oo fog.
VA-yadu waxay caadi ahaan ka shaqeeyaan guriga, iyagoo fulinaya hawlo uu sida caadiga ah kaaliyaha maamulka ama xoghayuhu qabto.
Waxaa laga yaabaa, tusaale ahaan, inay balamo sameeyaan, telefoon sameeyaan, qorsheeyaan safarka, maamulaan iimaylka, qabtaan hawlo bulsho (sida u dirida qoraalada mahadnaqa macaamiisha), ama galaan xogta kaydka xogta.
Shaqadani guud ahaan waxay sababtaa awooda fulinta waajibaadka soo socda:
Ka caawi macaamiisha hawl kasta oo maamul oo ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Hel oo shaandhee macaamiisha macquulka ah.
Ku qanci macaamiisha iman kara inay kuu shaqaalaysiiyaan kaaliyehooda dalwaddu.
Kaaliyeyaasha dalwaddu waa inay awoodaan inay wax kasta u qabtaan macaamiishooda oo ay ku samayn lahaayeen xafiisyada macmiilka
Xitaa haddii ay guriga joogaan surwaal iyo funaanado ay bisaddu dhabanka saaran tahay, waa inay u dhaqmaan si xirfad leh sida shaqaale xafiiska jooga.
Waxay kasbadaan mushahar saacad ah $ 18.97.
15. Soo -dhaweeyaha Xarunta Jimicsiga
Waajibaadka aasaasiga ah ee qofka boostada haysta waa:
Sii adeeg macmiil oo gaar ah dhammaan xubnaha, xubnaha aan ka tirsanayn, iyo isticmaalayaasha xarunta.
Diiwaangelinta xubnaha cusub iyo ka caawinta xubnaha jira su'aalahooda
Salaan xubnaha jimicsiga iyo isticmaalayaasha markay marayaan soo dhaweynta
Xubnaha waa in la hubiyaa oo xubinnimadooda la hubiyaa.
diiwaan gelinta xubnaha cusub iyo u hagida qofka
Bixinta macluumaadka fasalka iyo helitaanka
Ka jawaabidda su'aalaha ku saabsan baajinta xubinnimada
Waxay caadi ahaan kasbadaan qiyaastii $ 31116 sanadkii.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan soo dhaweynta ugu sarreeya
Muxuu sameeyaa soo-dhoweeyaha waqtiga buuxa?
Soo-booqdayaasha waxa loogu adeegaa salaam, soo dhawayn, iyo hagida hadba sida loogu baahdo. Wuxuu ogeysiiyaa shaqaalaha shirkadda booqdaha. Wuxuu ilaaliyaa amniga iyo nidaamyada isgaarsiinta. Wuxuu ka jawaabaa ama tixraacayaa weydiimaha booqdayaasha si uu u ogeysiiyo.
Waa maxay mushaharka ugu sarreeya ee soo dhaweeyaha?
Dawladaha leh Mushaharka ugu sarreeya
Degmada Columbia ($ 40,050), Connecticut ($ 36,520), New York ($ 35,870), Alaska ($ 35,460), iyo Washington ($ 35,360) ayaa leh celceliska mushaharka ugu sarreeya ee soo dhaweynta.
Imisa saacadood ayay soo dhaweeyeyaashu shaqeeyaan maalintii?
Soo dhawaynayaashu waxay caadi ahaan shaqeeyaan saacadaha shaqada ee caadiga ah, kuwaas oo ah 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Tani waxay kordhin kartaa inta lagu jiro xilliyada mashquulka ah, iyadoo ku xiran shirkadda, waxaana laga yaabaa inay u baahato soo-dhoweeyaha inay shaqeeyaan maalmaha fasaxa ah qaarkood.
Sideen u noqdaa soo dhaweeye wanaagsan?
Si joogto ah u dhoola cadee, iska ilaali cunista iyo xanjada, iska ilaali inaad isticmaasho aaladaha gacanta, ku dheji suufka farriinta, neef qoto dheer, isticmaal magaca soo wacaha, noqo Asluub ​​& Isticmaal Raalli ahaansho, iskana ilaali inaad dhahdo "Ma aqaano."
Waa maxay celceliska saacaddii ee soo dhaweeyaha?
Celceliska mushaharka saacadlaha ee soo dhaweeyaha waa $ 27.62.
Qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka soo dhaweynta ayaa ah jagooyin waqti-buuxa ah. Mushaharka soo dhaweynta, sida looga hadlay qodobkan, runtii waa mid soo jiidasho leh, waxayna qabtaan hawlo muhiim ah meel kasta oo ay isku arkaan.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ka shaqeyso soo-dhoweeye ahaan awood kasta, tixgeli tan iftiinka cagaaran. Waxaa jira soo-dhoweeyayaasha ugu mushaarka badan iyo shaqooyin aad qaban karto!
10 -ka Moodel ee ugu Lacagta Badan Adduunka 2022 -ka
25 Shaqaalaha Ururka Shaqaalaha Ugu Mushaarka Badan 2021
Intee in le'eg ayaad siisaa Guri -hayaha 2022 -ka? Waxyaabaha Abaalmarinta Maalinlaha ah
Hadda waxaad ugu dambeyntii qaadaneysaa fasax si aad isaga yareyso walbahaarka shaqada oo waxaad damacsan tahay inaad sameyso…